SOMALILAND: 16 Magafayaal ah ayaan Qabanay Kamana Hadhayno illaa aan u Saarno Xididdada |
SOMALILAND: 16 Magafayaal ah ayaan Qabanay Kamana Hadhayno illaa aan u Saarno Xididdada
Hargeysa (NN) 24/04/2016
Wasiir ku xigeenka Ammaanka ee Somaliland, Maxamed Muuse Diiriye ayaa sheegay in ay Qabteen 16-ruux oo ah Magafayaasha dadka Tahriibaya.
Wasiirka ayaa sheegay inay ballan ku qaadayaan sidii ay u cirib tiri lahaayeen kooxahaas la yiraahdo Magafayaasha, isla markaana ay xiriir la sameeyeen dawladaha dariska ah sidii ay ula dagaalami lahaayeen Magafayaasha.
“Mas’uuliyada tahriibka cid gaar ah oo lagu eedeyn kara ma jirto, waa dabeyl taagan, Dalka Itoobiya ee aynu jaarka nahay, Wajaalle illaa Burco waddada marto Waxaad ku dhaafaysaa shan iyo sodan qof oo saddex-saddex u socda oo Tahriibaya oo Itoobiya ka yimid, Itoobiya illaa Boosaaso lug bay ku tagaan, taasina waa musiibo Qaran, maalin dhawayd warbaahinta waxaa laga sheegay in 70,000 ay Itoobiya ka tahriibeen,” ayuu yiri Maxamed Muuse oo ka hadlayey arrimaha Tahriibka.
Isagoo ka hadlaya dadka ay u qab-qabteen in Dhallinyarada ay Tahriibayaan ayaa mar kale yiri. “Waxaanu xidhiidh la yeelanaynaa Dalalka jaar ah oo waxaa la sameeyey guddi Qaran iyo guddi gobol illaa Tuulo in faraqa la is qabsado oo Tahriibkaasi lala dagaalamo, waxaan idin sheegayaa xallay illaa habeen hore nimanka la yidhaa magafayaasha lix iyo toban qof baanu qabannay, kana hari mayno ilaa aanu xididda u saarno, dalalka jaarka nahay xidhiidh baanu la leenahay iyaga waa ku dhib, inagana waa inagu dhib, dawladuna kama seexan ee arrintani wxay noqotay arrin dareenkeena soo jeedisay”.
Doontii, Dhawaantan ku geeriyootay Badda u dhexeysa Masar iyo Giriiga ayaa noqotay tii ugu saameynta badnayd ee tahriibka Soomaalida, iyadoo ay ku geeriyoodeen, tiro badan oo Soomaali ah, Waxayna taasi keentay in si weyn looga dareemo Naxdinta Geeridaasi Guryo badan oo Somaliland ku yaalla.